Ama-Accelerator Amabhizinisi Amancane | UBob Prosen
UBob Prosen Uvula I-Accelerator Yamabhizinisi Amancane
NgoMsombuluko, Januwari 24, 2011 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa edlule, ngafunda futhi ngakujabulela kakhulu Kiss Theory Usale Kahle, incwadi evela kuBob Prosen enikeza izeluleko ezizwakalayo kumabhizinisi. Izinhlelo zokuqeqesha ubuholi nokuphathwa kwamabhizinisi kaBob zikhuphule kakhulu ukusebenza nenzuzo futhi zaguqula isiko eSaber, Hitachi, Sprint, AT & T kanye namakhulu amabhizinisi amancane esizweni sonke.
Ukubonisana nokuqeqeshwa kukaBob manje sekufuneka kakhulu - nayi ingxenye yakamuva evela ku-MSNBC:
Wonke umuntu uhlala ebuza ukuthi ungakhuphula kanjani ngokushesha ukusebenza nenzuzo kumabhizinisi abo. Kubukeka sengathi wonke umuntu ufuna ukwazi amasu aqondile adingekayo ukukhulisa ukuthengisa kwakho, anciphise inzuzo yabasebenzi futhi andise inzuzo yakho ngaphandle kwezimo zezomnotho. Ngisebenzise izeluleko eziningi uBob aseke wazinikeza selokhu ethula ibhizinisi lami futhi ibhizinisi liyachuma.
Mina noBob besilokhu sixhumana futhi wazama ukukhuthaza lolu chungechunge olukhethekile lokuqeqesha (Uvame ukukhokhisa u- $ 10,000 ngalolu hlobo lwento, kepha ufuna impendulo ngalolu hlelo.)
kulesi webinar yamahhala UBob uzokufundisa mathupha:
Ukusetha izinhloso "ezilungile" zezingxenye ezintathu ezibaluleke kakhulu zebhizinisi lakho.
Amamethrikhi webhizinisi abaluleke kakhulu azokusiza ukuthi ufeze izinhloso zakho.
Ungayihlola kanjani impumelelo yakho yobuholi. Ngabe unakho okudingekayo ukuhola inhlangano yakho ukuthi izuze inzuzo engavamile?
Futhi, vele uvakashele isiza ku- buka ukuqeqeshwa kwevidiyo. Ngemuva kokubuka ukuqeqeshwa qiniseka ukuthi ufika kuhlu lukaBob oluza kuqala ukuze waziswe uma lolu hlelo lokuphumelela lutholakala. Yilokho-ke, ngethemba ukuthi uyakujabulela ukuqeqeshwa!
PS: Ngezansi kwevidiyo ungalanda amabhonasi akhetheke kakhulu bese uphawula ngokuqeqeshwa.
Tags: Ukulandelela umkhankaso we-analyticsusesho lwamavidiyoIzincwadi Zokumakethauhlelo lokusebenza lweselula lokuthengisa
Ukuthuthukisa okuqukethwe kwakho emhlabeni jikelele
Khulisa umkhiqizo we-imeyili ngemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi